‘दाहालको आत्मालोचनाः ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीले आठौं महाधिवेशनमा पार्टी सञ्चालनका क्रममा कमीकमजोरी भएको भन्दै आत्मालोचना गर्नुभएको रहेछ। यो राम्रो कुरा हो। कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आत्मालोचनालाई सकारात्मक रूपमै लिइन्छ।
हुक्सले कोरेको नारीवादको बाटो
नारीमाथि पितृसत्ताले थोपरेको दमन र शोषणको परम्पराभेदनलाई आफ्नो लेखनको ‘ट्रेडमार्क’ बनाउँदै सीमान्त समुदायसम्म पुग्नु हुक्सको उद्देश्य थियो।
धर्मनिरपेक्षता होइन, धार्मिक स्वतन्त्रता
पन्थनिरपेक्षता भन्नुपर्नेमा ‘रिलिजन’ को गलत अर्थ लगाएर संविधानमा धर्मनिरपेक्षता राखियो। यसको साटो धार्मिक स्वतन्त्रता भनौं या त धर्मको विषयमा मौन बसे पनि पुग्छ।
मूल्य (अ)न्यायको मार उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले कानून बनाएर मात्र हुँदैन, उपभोक्ता आफैं पनि ती कानूनबारे जानकार हुनुपर्छ।
नेपाललाई सार्वभौम बनाएको त्यो सन्धि सुगौली सन्धिले नेपाललाई भौगोलिक आकार दिए पनि हाम्रो सार्वभौमसत्ताको परिचय विश्वमा पुर्‍याएको सन् १९२३ को सन्धिले हो। तर, यो सन्धिबारे जसरी र जति बहस हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन।
प्रकृतिप्रेमीको उत्सव : जलपन्छी गणना बीस वर्षमा चितवन आसपासका सिमसार क्षेत्र बाहेक अन्य सिमसारमा जलपन्छीको सङ्ख्या घट्दो छ । कुनै समय साइबेरियाबाट हजारौंको सङ्ख्यामा आउने जलपन्छी अचेल टौदहमा आउँदैनन्। विगतमा कोशी नदी आसपास पचासौं हजार पानीचरा हुन्थे भने हाल देशभरको गणनामा मुश्किलले पचास हजार पुग्छन्।
कसरी गर्ने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार? लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता कायम गर्दै राजनीतिक आस्थाप्रति समर्पित बन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुको विकल्प देखिंदैन।
गगन थापाज्यू, मिडियामा हेडलाइन बनेर मात्र अब पुग्ला? अबको राजनीति सडकमा उफ्रिने, ढुंगा हान्ने, चर्को भाषण गर्ने शैलीको भएर पुग्दैन। बद्लिँदो सामाजिक–आर्थिक परिवेशमा बाँचिरहेका र बिथोलिएको अर्थ व्यवस्था र प्रकृतिको चक्रमा उकुसमुकुस भोगिरहेका नागरिकका लागि युवा नेतासँग कस्तो योजना छ?
आखेटोपहार: शान बनेको ‘अपराध’ आखेटोपहार सम्बन्धी रिट हेर्ने इजलासमा न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो- चोलेन्द्र शम्शेर जबरा। अधिवक्ताहरूबीच गाइँगुइँ चल्यो- ‘धेरैजसो आखेटोपहार राणाहरूकै घरमा छन्, चोलेन्द्र श्रीमान्‌ले के निर्णय गर्नुहोला!’
‘गीत गाएर पाप हैन, सत्कर्म गरेको रहेछु’ म साहित्यमा रुचि राख्छु, तर सिर्जना गर्न असमर्थ छु। यो मेरा कमजोरी भनूँ वा के भनूँ? तर, साहित्यको उत्सर्गका लागि कविले शब्दद्वारा बुने जस्तो गायकले ध्वनितरङ्गद्वारा आवरण बनिरहेको हुन्छ।
लेनदेन राजनीति पैसाको आडमा जस्केलोबाट पस्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक दलहरूमा त्यागी, योग्य र इमानदार व्यक्ति पाखा लागेर नेतृत्वलाई प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरू हावी हुँदै छन्।
अबको बाटो: बजार नपुग्ने ठाउँमा मात्र सरकार अर्थ-राजनीतिक बहस हामीकहाँ शुरू नै भएन। सबै काम सरकारले गर्ने हो कि? बजारले गर्ने हो कि? दुवैको मिश्रणबाट हुने हो? छलफल नै भएन।
दश तस्वीरमा हेर्नुस् एमालेको दशौं महाधिवेशन संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)को दशौं महाधिवेशन चितवनमा शुरू भएको छ।
बागमती प्रदेशबाट एमालेका ३२७ महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन (सूची सहित) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को १०औं महाधिवेशनका लागि बागमती प्रदेशका १३ जिल्ला र अन्य सङ्गठनबाट ३२७ जना प्रतिनिधि चयन भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन स्थायी समाधान होइन प्रधानन्यायाधीश जबराका जेजस्ता क्रियाकलाप सार्वजनिक भएका छन्, तिनका आधारमा उनी पदमा बसिरहन किमार्थ मिल्दैन। तर, एक व्यक्तिको बहिर्गमन मात्रैले न्यायालयमा मौलाएको राजनीतीकरण र बेथिति टुङ्गिनेवाला छैन।
जलवायु सङ्कटमा हाम्रा प्राथमिकता
जलवायु परिवर्तनमा भूमिका नरहेका तर बढी असर भोगिरहेका नेपाल जस्ता देशहरूले बदलिएको मौसमी चरित्रबाट सिर्जित सङ्कट समाधान गर्न सामूहिक प्रयासका लागि अझ आवाज उठाउनुपर्छ।
कसरी घटाउने विद्युत् सङ्कट?
विश्व चरम ऊर्जा सङ्कटबाट गुज्रिरहँदा नेपालले नवीकरणीय ऊर्जाको नमूना केन्द्रका रूपमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ।
शहर र मजदूर
जुन भव्य शहरमा बस्छौ तिमी के त्यो जादू-टुनाले चलेको छ?
यसरी मनाइन्छ नेवार समुदायमा म्हपूजा तिहारको चौथो दिन कात्तिक शुक्ल प्रतिपदाको अवसर पारेर आज नेवार समुदाय आफ्नै शरीरको पूजा गर्दै मौलिक पर्व म्हपूजा मनाउँदै छ।
देशका सबै अङ्ग गम्भीर रोगले सङ्क्रमित!
कोप-२६ लाई काठमाडौंबाट ट्रली बसको सन्देश सरकार कार्बन घटाउने आफ्नो प्रतिबद्धतामा इमानदार छ भने तत्काल नै ट्रली बसको ग्यारेजमा चार्जिङ स्टेशन बनाएर स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगको राम्रो उदाहरण पेश गर्न सकिन्छ।
यात्रागीत एक्लै हिंड जिन्दगीमा ए बटुवा, तिमी बस् एक्लै हिंड भीडमा पनि सब एक्लै छन्, तिमी पनि बस् एक्लै हिंड।
लिम्बुवान दस्तावेजमा इतिहास-चिन्तन मदन पुरस्कार जस्तो गरिमापूर्ण सम्मान प्राप्त गर्न सफल लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह र ग्रन्थकार भगिराज इङ्नाम नेपालको इतिहास संरक्षण र खोजका क्षेत्रमा नयाँ राष्ट्रिय जागरणको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्नुपर्छ।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पुनरावलोकन जरुरी कुनै पनि देशमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि न्यायपालिकाको संस्थागत विकास हुनुपर्छ। विशेषतः न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ।
सर्वोच्चमा देखिएको विवाद समस्याको चुरोमै पुगेन, न्यायालय सुधार्न तीन वटा काम गरौं प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूलाई नियुक्त गर्ने र हटाउने संवैधानिक विधि छ। संवैधानिक विधिभन्दा बाहिर जानु हुँदैन।
शान्ति सेनाको शान शान्ति मिसनमा सहभागिताको सार्थकता राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक ‘सफ्ट पावर’ सिर्जना गर्न सक्नुमा छ। त्यसैले, सरकारले आफ्नो क्षमता र दक्षता प्रयोग मार्फत शान्ति सेनालाई ‘सफ्ट पावर’ मा उपयोग गर्नुपर्छ।
बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिंदै बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आज विश्वासको मत लिने भएकी छन्।
संस्कृति र प्रकृति नेपालका सौम्य शक्तिका स्रोत सौम्य शक्तिमा हामी संसारमै धनी छौं। चाहे चार हजार वर्षअघिको वैदिक सभ्यताको कुरा गरौं वा २५ सय वर्षअघि संसारलाई चमत्कृत पार्ने बुद्ध धर्म।
किन आवश्यक छ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन? निर्वाचन अत्यधिक महँगो हुँदै गएको छ। पूर्ण समानुपातिकमा गएपछि चुनाव खर्चिलो पनि हुँदैन। अहिले जसरी व्यक्तिले खर्च गर्नु पर्दैन। पार्टीले सामूहिक रूपमा भोट माग्छ।